अस्पतालजन्य फोहोर बिक्री गर्दै कोसी अस्पताल - Arun Khabar
विराटनगर, ५ असार । विराटनगरको कोसी अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहोर बिक्री हुन थालेको छ । यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाले सःशुल्क व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । जोखिमयुक्त मानिने अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित थिएन । अहिले भने अस्पतालजन्य फोहोर वर्गीकरण गर्दै बिक्री गरेर अस्पतालले आम्दानी लिन थालेको हो ।
संक्रमणजन्य र संक्रमणरहित फोहोरलाई वर्गीकरण गर्दै अलगअलग डस्टविनमा संकलन गरेर ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गरिएको अस्पतालकी फोहोर व्यवस्थापन फोकल पर्सन सोनी सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । यसअघि फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरलाई महिनाकै ६० हजार रूपैयाँसम्म बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो । महानगरले खुला ठाउँमा फाल्दा फोहोरबाट विभिन्न रोग र महामारीको संक्रमणको जोखिम उच्च थियो । ‘बिक्री हुन थालेपछि चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापतर्फको खर्चसमेत कटौती भएको छ,’ सुवेदीले भन्नु भयो, ‘अर्कोतर्फ आम्दानी हुनुका साथै खुला ठाउँमा जथाभावी फाल्दा हुने संक्रमणको जोखिम हटेको छ ।’ फोहोर व्यवस्थापनमा यूएनडीपीले सहयोग गरिरहेको छ ।
यूएनडीपीले व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिनुका साथै फोहोर संकलन गर्ने डस्टविन उपलब्ध गराएको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेलले पहिलो पटक फोहोर बिक्री गरेर ६ हजार ५ सय रूपैयाँ कमाइ भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सिरिन्ज, त्यसको खोल, निडिल, स्लाइनको बोतल, ड्रेसिङ प्याड, क्यानोला लगायत रगत मिसिएका संक्रमणजन्य फोहोरलाई अलग्गै राख्ने गरिएको छ । अस्पतालबाट १५ प्रतिशत संक्रमणजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी र कुरुवाले प्रयोग गर्ने प्लाष्टिक, कागज, पानीका बोतल, औषधिका खोल, खानाबाट निस्कने लगायतका संक्रमणरहित फोहोर पनि छुट्याएर संकलन गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘जोखिमयुक्त र जोखिमरहित तथा सड्ने र नसड्ने फोहोरलाई अलगअलग संकलन गरी सम्झौता गरेर ठेकेदारलाई बिक्री गरिन्छ,’ डा. खरेल भन्नु हुन्छ, ‘फोहोर व्यवस्थापन उचित हिसाबले हुन थालेपछि संक्रमणको सम्भावना कम हुनुका साथै अस्पतालको वातावरण पनि राम्रो भएको छ ।’ संक्रमणको जोखिमका हिसाबले अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी फाल्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘सरकारी अस्पताललाई सुधारको बाटोतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरामा अस्पताललाई नमूना बनाउने योजना छ ।’
अबका दिनमा फोहोर बिक्रीबाट मासिक १ लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने डा. खरेलले बताउनु भयो । अस्पतालले प्रसूतिका क्रममा उत्सर्जन हुने फोहोर तथा सालनाल, शल्यक्रियाका क्रममा निस्किने ट्यूमर आदि वस्तुबाट जैविक ग्यास उत्पादन गरिरहेको छ ।